ब्राजिलले सार्वजनिक गर्यो विश्वकपका लागि अन्तिम टोली, को–को परे सूचीमा? (फोटो फिचर) | Suvadin !
ब्राजिलले सार्वजनिक गर्यो विश्वकपका लागि अन्तिम टोली, को–को परे सूचीमा? (फोटो फिचर)
यसैबीच पछिल्लो संस्करणको अायोजक राष्ट्र तथा विश्वकपको सदावहार दाबेदार टोली ब्राजिलले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका छन्। ब्राजिल राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन तेश्रो साताबाट सुरु हुने फिफा विश्वकपका लागि २३ सदस्यीय अन्तिम टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। प्रशिक्षक टिटेले घोषणा गरेको टोलीमा पेरिस सेन्ट जर्मेनका फरवार्ड नेयमारको पनि नाम रहेको छ। २६ वर्षीय फरवार्ड विगत केहि महिनायता चोटका कारण मैदान बाहिर रहेपनि प्रशिक्षकले टोलीमा समेटेका हुन्।
उमेश दाहाल, काठमाडाैं, १ जेठ – विश्व फुटबलको महामेला फिफा वर्ल्डकप अर्थात् विश्वकप शुरु हुन अब २८ दिन मात्र बाँकी छ। र, समर्थकहरुबीच चोक—चोकमा चर्चा त हुन थालेका छन्। यसैगरी सहभागी राष्ट्रहरुले पनि अावश्यक तयारी थालेका छन्।
यसैबीच पछिल्लो संस्करणको अायोजक राष्ट्र तथा विश्वकपको सदावहार दाबेदार टोली ब्राजिलले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका छन्। ब्राजिल राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन तेश्रो साताबाट सुरु हुने फिफा विश्वकपका लागि २३ सदस्यीय अन्तिम टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रशिक्षक टिटेले घोषणा गरेको टोलीमा पेरिस सेन्ट जर्मेनका फरवार्ड नेयमारको पनि नाम रहेको छ। २६ वर्षीय फरवार्ड विगत केहि महिनायता चोटका कारण मैदान बाहिर रहेपनि प्रशिक्षकले टोलीमा समेटेका हुन्।
टोलीमा प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीका चार खेलाडी छन्। गोलरक्षक एडरसन, डिफेन्डर ड्यानिलो, मिडफिल्डर फर्नानडीन्हो र फरवार्ड ग्याब्रिएल जेससले टोलीमा स्थान पाएका हुन्। चेल्सीका विलियन र लिभरपुलका रोबर्टो फेर्मिनो पनि टोलीमा समेटिएका छन्।
यस्तै एएस रोमा बाट व्यवसायिक फुटबल खेलिरहेका गोलरक्षक एलिसन र कोरिनथियन्सका क्यासिओ पनि टोलीमा छन्। डिफेन्समा रियल म्याड्रिडका मार्सेलोसँगै पिएसजीका थियागो सिल्भा र मार्किन्हसले रक्षापंती सम्हाल्ने छन्। यसबाहेक इन्टर मिलानका मिरान्डा, ग्रेमिओका पेड्रो जेरोमेल, एटलेटिको म्याड्रिडका फिलिपे लुइस र कोरिन्थियन्सका फाग्नर छन्।
मिडफिल्डमा बार्सिलोनाका फिलिप कोउटिन्हो र पाउलिन्हो, शख्तर डोनेस्कका फ्रेड, रियल म्याड्रिडका क्यासेमिरो, युभेन्ट्सका डग्लस कोस्टा र बेजिङका रेनाटो अगुस्टो छन्। फरवार्डमा शाख्तरका टाइसनले फिर्मिनो, जेसस र नेयमारलाई साथ दिनेछन्।
चोटका कारण पिएसजीका डिफेन्डर ड्यानी आल्भेसले टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन्। ब्राजिल विश्वकपको समूह ‘ई’ मा छ। ब्राजिलको समूहमा कोस्टा रिका, सर्बिया र स्विटजरल्यान्ड रहेका छन्।
विश्वकप गुमाउने उत्कृष्ट १० खेलाडी